Maxaa ka cusub Cuntooyinka Cidhibta ah sanadkan? - Cuntooyinka giraangiraha
Maxaa ku cusub Cuntooyinka Cidhibtooda sannadkan?
Kabaha quruxda badan, goobta quruxda badan ee Wabiga Mississippi ee jasiiradda St. Paul ee Harriet, rafiiq ay ka buuxaan abaalmarino waaweyn, oo lagu baashaalo qol sawir leh iyo daabacaadda shaashadda - dhammaantood waa ku noqdeen Cunnooyinka Ciribta, xafladeena sanadlaha ah ee weyn xagaaga Agoosto 3. Tikidkaaga (oo aad ka iibsan karto halkan!) wuxuu kuu sahlayaa inaad hesho cunno iyo cabitaan aad u tiro badan oo makhaayadaha maxalliga ah iyo khamriga, gelitaanka Swank Soles Competition ee kabaha ugu fiican iyo fiidkii madadaalada ka dhexeysa saaxiibbada Cunnada ee taageerayaasha Wheels.
Iyo kuwa horay u soo maray Cunnooyinka Heels, waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno dhawr xafladood Meals on Heels sanadkan.
Nooc cusub oo dhawaq ah iyo muusig Tim Mahoney
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno cusbooneysiin weyn oo ku saabsan waayo-aragnimada madadaalada ee Meals on Heels! Waxaan gacanta ku haynaa nidaam kuhadlid cusub si aan u hubino in waayo aragnimada muusiggu ay tahay midda ugu sareysa iyo ogeysiisyada ku guuleystayaasha tartanka iyo kooxda Swank Soles ee heysata ayaa dhawaaqeysa dhawaaq dheer. Iyo yaa ka fiican in lagu jebiyo nidaamkayaga dhawaaqa cusub Tim Mahoney?
Tim's jecel yahay goobta maxalliga ah si uu u yareeyo heesaha dhagaxa ah ee soo jiidashada leh oo uu ku dhejiyo heesaha aad ugu jeceshahay fannaaniinta ka socota Prince ilaa Paul Westerberg - oo had iyo jeer soo bandhigaya bandhig tamar sare leh. Waxa kale oo aad u aqoonsan kartaa inuu yahay tartame xilli-ciyaareedkii ugu horreeyay ee Codka.
Oo yaa iloobi kara martigaliyaasheena? Falen laga bilaabo Dave Ryan Show ee KDWB ayaa mar kale dib ugu soo laabatay emcee, waxaana ku soo biiri doona KARE11's Melissa Colorado!
Makhaayado fara badan oo xiiso leh
El Burrito Mercado, Cuntada Cuntada Wadajirka ah, Waxna majiraan Cunnada loo yaqaan 'Bundt Cakes', French Meadow, Rustica Bread iyo Steakhouse ee Mystic Lake oo dhammaantood u imanaya Meals on Heels markii ugu horreysay! Xitaa ka sii wanaagsan, Cunnooyinka Heels istaaga St. Paul Grill, Simply Steve's (maxaa Cunnooyinka Heels la'aantood ku jiri lahaa kuwa madoow bean-quinoa madow?) Iyo Pizza Luce sidoo kale waa soo noqdeen! Ka eeg cunnooyinka buuxa Heerarka Heels.
Ikhtiyaarro badan oo cabitaan ah
Waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno Fulton Brewing, Big Wood Brewery iyo Summit Brewing si aan u soo jiidno martidayada quruxda badan oo leh tiro badan oo microbrews maxalli ah. Waaba intaasoo aad u maleyneyso in Cunnooyinka Cidhibtoodu ay tahay dhacdo si adag loogu talagalay kuwa jecel khamriga, waxaan lahaan doonnaa bar si buuxda loogu kaydiyey dhammaan noocyada khamriga wanaagsan. Farxad!
Iskusoo wada duuboo waxyaabahaas xiisaha leh, Cunnooyinka dhacdooyinka magacyada Heels waa dabcan markale. Tartankan 'Swank Soles' wuxuu ku abaal mariyaa hal nin iyo naag abaalmarin lagu qiimeeyo $250 doorashadooda ka baxsan adduunka ee kabaha. Tartankeenu waa sidii loogu talagalay weligiisba alaabooyin badan oo loogu deeqay, oo ay ku jiraan abaalmarinno cabsi leh sida tikidhada tikidhada 2 ee safarka oo laga helo Southwest Airlines, oo ah qayb 12 ah oo loogu talagalay ciyaarta Minnesota Twins, iyo safarka kalluumeysiga ee Ron Schara.
Waxaad sidoo kale ku kordhin kartaa taageeradaada waayeelka maxalliga ah tigidh VIP ah. Tan waxaad kuheli doontaa boorso cufan leh waxyaabo wanaagsan gudaha waxaana lagugu soo dhaweyn doonaa soo dhaweyn champagne ah!
Waxyaalahan oo dhan, kuwo cusub iyo kuwii hore, waxay u noqon doonaan habeen lama iloobaan ah! Hada tikidhadaada hel!